आजको राशिफल : शुक्रबार कस्तो छ तपाईंको भाग्यफल ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : शुक्रबार कस्तो छ तपाईंको भाग्यफल ?
Khabar house | १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ००:४९ | Comments
काठमाडौं : वि.सं.२०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल ३० तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । बैशाख कृष्ण पक्ष । तिथि–चतुर्थी,४७ घडी २५ पला,रातको १२ बजेर २६ मिनेट उप्रान्त पंचमी । नक्षत्र–ज्येष्ठा,२८ घडी ५७ पला,बेलुकी ०५ बजेर ०२ मिनेट उप्रान्त मूल । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर २७ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ३६ मिनेट । दिनमान ३२ घडी ५१ पला ।
मेष : व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन बढि नै सं’घर्ष गर्नुपर्नेछ । कामका सवालमा उठ्ने गोप्य कुराहरु बाहीर आउन सक्ने हुनाले सजक रहनु पर्नेछ । श्वासप्रश्वास तथा छाती सम्वन्धी स’मस्याले सताउने हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो महशुस हुनेछ । दिदी बहिनीसँग मन मु’टाव बढ्ने योग रहेकोछ । सवारी साधन तथा भौतिक सम्पतिको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला, दिन मध्ययम रहेकोछ । साझपख बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरीएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
बृष : अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछि पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ। माया प्रे’म गर्नेहरुले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय व्यातित गर्दा खुशी भएको महशुस गर्ने छन् । रमाईलो यात्राको तय हुने तथा व्यापारबाट मनग्गे नाँफा कमाउन सकिनेछ । दा’म्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अगी बढ्न सकिनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधन प्राप्तीको गतिलो सम्भावना रहकोछ । साझपख सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
मिथुन : आफन्त तथा मावली पक्षको सहयोग पाइने हुनाले कामहरु गर्न शरिरमा उर्जा पैदा हुनेछ। बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई हराउदै सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिनेछ। व्यापारमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ भने थोरै लगानी बाट यथेष्ट लाभ लिन सकिनेछ । अदालती निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा आउने भएको हुनाले न्याय पाएको अनुभुती हुनेछ । प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
कर्कट : आ’कश्मिक धन तथा सम्पती लाभ हुनेयोग रहेकोछ भने शेयर बजार तथा सट्टाको व्यावसायबाट प्रशस्त नाँफा कमाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा गरीएको लगानीबाट मनग्गे धन लाभ हुनेछ । भौतिक सम्पति तथा वि’लाशी वस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाइने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । नयाँ ठाउँबाट प्रे’म प्रस्ताव आउने तथा मायामा सा’मिप्यता बढेर जानेछ ।
सिंह : घरजग्गा तथा सवारी साधनको खरिद बिक्री गर्दा ध्यान दिनुहोला घाटा लाग्न सक्छ । बिद्यामा सन्तोषजनक प्रगती भएर जानेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलो’चनात्मक समर्थन रहने छ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय भने फस्टायर जानेछ । आमा तथा आमा सरहका मानिससँग मन मु’टाव वढ्नेछ । विश्वास गरेकाहरु बाट धो’का हुनसक्छ सजक रहनुहोला । साझपख समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ ।
कन्या : आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुको सहयोग तथा समर्थन पाईन ग्रहयोग रहेकोछ । दाजुभाई हरुसँगको सम्बन्धमा नयाँ पनको विकास हुनेछ । छोटो दुरिको व्यावसायिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने पराक्रम बढेर जाने हुनाले शाहशिलो काम गर्ने आट आउनेछ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने दा’म्पत्य जीवन शुखि रहनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले घर जग्गा तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
तुला : बोलिको प्रभाव बढ्ने हुनाले महत्वपूर्ण निर्णयहरु आजको दिन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा दिन बि’त्ने तथा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पति प’त्नी बीच विश्वासको वातावरण बढ्ने तथा माया प्रे’ममा सामिप्यता बढेर जानेछ । कु’टुम्बबाट तपार्ईँले गरेको काममा सहयोग प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सफलता हात लाग्ने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाँफा कमाउन सकिनेछ ।
बृश्चिक : व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिने छ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरीएको लगानी खेर जाने छैन भने पद पाउने योगलाई नकार्न सकिदैन । सामाजिक कामहरु समयमा सम्पादन हुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बि’त्ने हुदा मन प्रशन्न हुनेछ । प्रे’ममा सफलता तथा सामिप्यता बड्नेछ । बिद्यामा गरीएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
धनु : न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर काममा व्यस्त हुनुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । आर्थिक अभावले महत्वपूर्ण कामहरु थाति रहने छन् । लामो दुरिको वैदेशिक यात्राको तय हुनेछ भने विदेशी भूमिमा बसेर श्रम गर्नेहरुले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउन सक्नेछन् । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्वन्धी स’मस्या बढ्ने तथा औषधी उपचार खर्च बढेर जानेछ । साझको समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा वृद्धि हुनेछ ।
मकर : व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । बिशेष गरी हाईड्रोपावर, पानी तथा औषधीसँग सम्बन्धीत व्यावसायबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । बिद्यामा सोचे अनुरुप नै प्रगती हुनेछ । परिवार तथा आफन्तहरु तपार्ईँको कामदेखि प्रशन्न हुनेछन्। सवारी साधन प्राप्त हुने योग रहेको छ । दाजुभाई बाट राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ । माया प्रे’ममा विश्वासको वातावरण झन कसिलो भएर जानेछ। सामाजिक क्षेत्रमा नाम,दाम तथा प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। साझपख लामो दुरिको यात्राको तय हुनेछ।
कुम्भ : आउने अवसरलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न सक्दा चाहेजस्तो उपलव्धी हासिल गर्न सकिनेछ । नोकरिमा वढोत्तरी हुने योग रहेकोछ भने राजनीति गर्नेहरुले राज्यबाट विशेष पद प्राप्त गर्न सक्नेछन् । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे नाँफा कमाउन सकिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरु सफल रुपमा स्थापित हुनेछन् । गीत संगितमा मन जानेछ भने माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेकोछ ।
मीन : सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपार्ईँको बलियो प’कड रहने हुनाले कामहरु सजिलै सम्पादन हुनेछन् । राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाइने छ भने मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ। धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । धा’र्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिर तिरको यात्रा गरी प्र’साद तथा टिका ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्र बलियो रहने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ ।
तपाईँ दिन शुभ रहोस् । यूवा ज्योतिषी डिपी भण्डारी, ज्योतिष परामर्ष सेवा केन्द्र । चाबहील, काठमाडौं फोन न.९८०८३०७२७५ नोट : चिना तथा टिप्पन वनाउन,चिना हेराउन तथा वास्तुसँग सम्बन्धीत जानकारिको लागी अवस्य सम्झनुहोला ।